Dadka jabtada qaada oo Iswiidhen ku soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka jabtada qaada oo Iswiidhen ku soo badanaya
La daabacay måndag 10 juni 2013 kl 10.45
Waxaa soo badanaya dadka cudurka jabtadu ku dhaco. Wuxuuna gaar ahaan ku badan yahay dadka dhallinta yar iyo ragga la galmooda ragga kale. Machadka ka hortagga cudurada faafa wuxuu ku tilmaamay arrin walaac leh gaar ahaan marka laga eego bakteeriyada oo marba marka ka dambeysa sii noqoneysa mid adkeysi badan.
Dhacdooyinka dadka laga helay jabtada waxay ka soo kordheen 951 dhacdo oo la helay sannadkii 2011 oo ay gaareen 1098 dhacdo sannadkii la soo dhaafay, taasina waa koror gaaraya boqolkiiba 16. Sidaasna waxaa lagu muujiyey warbixin cusub oo uu soo saaray Machadka ka hortagga cudurada faafa oo afka iswiidhishka lagu yiraahdo Smittskyddsinstitutet (SMI). Qaadidda cudurkaanina waa ay soo kordheysey sannad walba marka laga soo bilaabo bartamihii sagaashameeyadii.
Ragga qaada cudurkaani waxay ku labanlaabmaan dumarka qaada. Waxaana taas sabab u ah in qaadidda cudurku uu ku badan yahay ragga ragga kale la galmooda marka la barbardhigo bulshada inteeda kale. Hase yeeshee wuxuu machadka SMI ogaaday in dhacdooyinka cudurkaan ay ku soo badnaadeen dhallinyarada la galmoota jinsiga ka soo horjeeda, waa galmada dhexmarta lab iyo dheddig.
Jabtadu waa cudur ka mid ah cudurrada galmada lagu kala qaado. Waxaana keena baktiiriyada nooca loo yaqaan “Neisseria gonorrhoeae.” Wuxuu ku dhacaa xubnaha taranka ee ragga iyo dumarkaba. Waxaa cudurka jabtada lagu daaweeyaa daawada antibiyootikada. Haddii aan la daaweynna waxaa dhici karta in uu qofka u keeno waxyeelooyin ballaaran ay ka mid noqon karaan infakshano dhaliya in uu qofku noqdo madhalays, iyo la qaadsiiyo ilmaha kolka la ummulinayo.